बनेपा पुरानै लयमा ! सं क्रमण बढ्ने चिन्ता – मिलिजुली खबर
बनेपा पुरानै लयमा ! सं क्रमण बढ्ने चिन्ता
बनेपा नगरपालिकाले करिब दुई साताको पूर्ण शिल हिजो देखि हटाइसकेपछि चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ । नगरपालिकाले पहिलो पटक जेठ ४ गते राति १२ बजेदेखि १२ गतेसम्म शिल गरेको थियो । नगरपालिकाले दोस्रो पटक थपेको शिल अवधिमा १७ गते राति १२ बजे सकिदै गर्दा १८ गतेदेखि शिल नगर्ने घोषणा गर्यो । अर्थात् नि षेधाज्ञा मात्रै गर्ने निर्णय गर्यो । नगरपालिका यो निर्णय सँगै दुई सातासम्म घर ब्यवसाय बन्द गरेर बसेका ब्यवसायी खुशी भए । १८ गते बिहानै देखि पसल, ब्यवसाय खुले । नगरपालिका धेरै जसो मान्छे एकैपटक बजार निस्कदा लगभग जात्रा जस्तै देखिएको थियो । राजधानी पूर्वका जिल्लाहरुको प्रमुख ब्यापारीक क्षेत्र बनेपा शिल हुँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको थियो । पूर्ण शिल हटेपनि जेठ २६ गतेसम्मका लागि पसल खोल्ने समय निर्धारण गरिएको छ । तर नगरपालिकाको नियम धेरैले मानेका छैन् ।
नगरपालिकाले विहान ६ बजेदेखि बिहान ९ बजेसम्म पसल खोल्न पाईने नियम तोकेको छ । त्यसमा पनि खाद्यान्न, ग्याँस, तरकारी, फलफूल, खानेपानी, पशुको दाना बेचबिखन गर्ने पसलहरू नेपाल सरकारले तोकेको जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गरेर खोल्न पाईने भनिएको छ । एकैपटक मान्छे थुप्रिएपछि कस्ले अपनाउने सावधानी ? नगरपालिकाको आदेश अनुसार केहि बैंक तथा वित्तीयहरू कर्मचारीको आलोपालो विधि मार्फत खुलेका छन् । नगरपालिकाले निजी तथा सार्वजनिक सावरी साधन चल्न नपाउने भनेको छ । तर निर्वाध रुपमा निजी सवारी साधन भित्री सडकमा समेत गुडिरहेका छन् ।
उद्योग, कलाकारखाना पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न पाईने छ । औषधी तथा अस्पताल, विजुली, सञ्चारका कार्यालय, फोहोर मैला व्यवस्थापनका कार्यालयहरू पनि खोल्न पाईने छ । भिडभाड हुने जिमखाना, सिनेमा हल, विद्यालय, पार्टी प्यालेस, होटल, रेष्टुरेन्ट खोल्न नपाईने भनिएको छ । तर भित्रभित्रै होटल तथा रेष्टुरेण्ट खुलेका छन् । सडकमा चहल पहल अस्वभाविक ढंगले बढेको छ । मोटरसाइकल वर्क शप, सपिङ कम्प्लेक्स, कपडा पसल, जुत्ता पसल समेत निर्वाध रूपमा खुल्न थालेका छन् । त्यो दिनभर जसो नै । शिल गरेपछि सं णक्रम निकै कम भएको बनेपामा यहि अवस्था रहे फेरी कोरोना सं क्रमण पहिलेकै अवस्थामा फर्कने चिन्ता चिकित्सक तथा स्वास्थ्यहरूले गर्न थालेका छन् । बनेपाको शिल हटे लगत्तै जिल्ला भरमै चहल पहल बढेको छ ।